सूचना प्रविधि – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on तपाईंको सिम कार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? थाहापाउन यसो गर्नु`होस्
सरकारले नागरिकको पहिचान खुल्नेगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई व्यक्तिको सिम|कार्डसँग जोडेर ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
यसरी सिम|कार्डसँग राष्ट्रिपत्र जोडिने भएसँगै प्रयोकगर्ताले आफूले प्रयोग गर्ने सिमकार्ड आफ्नै नाममा बनाउनु पर्ने भएको छ । अर्को तर्फ एक जना व्यक्तिको नाममा एउटै सेवा|प्रदायकका दुई भन्दा बढी सिम कार्ड नरहने व्यवस्था गर्दै नियमन`कारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सेवा|प्रदायकहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
यस्तोमा टेलि|कमले अरुको नाममा रहेका तथा दुई|भन्दा बढी सिम|कार्ड रहेका ग्राहको पहिचान गरी सचेत गराउन थालेको छ । त्यतिमात्र नभएर सिम`कार्ड व्यक्तिको बैंकिङ कारो|बारदेखि अन्य विभिन्न प्रयोज`नमा समेत उपयोग हुने भएकाले यसलाई सुरक्षाको हिसाबले पनि हेर्न थालिएको छ ।
त्यसैले प्राधि|करणले विभिन्न समय`मा सूचना जारी गर्दै सिमकार्ड आफ्नै नाममा दर्ता गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । सेवा प्रदायकले पनि यसबारे आफ्ना प्रयोगकर्ता`लाई सजग गराउँदै आएका छन् ।
केहि दिन अघि प्राधि$करणले सिम बिक्री गर्दा ग्राहक|हरुको नागरिकता वा आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात राखेर मात्र सिम बिक्री गर्नुपर्ने र एक ग्राहकलाई अधिकतम २ भन्दा बढी सिम बिक्री गर्न नपाउने गरी निर्देशन दिएको छ ।
यसैक्रममा नेपाल टेलि`कमले अनस्टक्चर सप्लिमेन्ट्री सर्भिस डेटा (यूएसएसडी) मार्फत आफूले प्रयोग गरिरहेको सिम`कार्ड कसको नाममा दर्ता भएको छ भनेर थाहा पाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
टेलि`कमले यसअघि म्यासेज पठाएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सिमबारे जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिला`एको थियो । अब भने प्रयोग|कर्ताको थप सह|जताको लागि यूएसएसडी मार्फत समेत त्यस्तो सुविधा दिन थालिएको हो ।
यसको लागि टेलि`कमका सिम प्रयोग`कर्ताले आफ्नो मोबाइ`लमा *९२२# डायल गरेर थाहा पाउन सक्ने`छन् । साथै त्यसमा सिम दर्ता भएको व्यक्ति तपाईं स्वयम् हो वा अरु नै हो भन्ने विषयमा समेत सोध्ने गरिएको छ । *९२२# डायल गरी दर्ता भएको व्यक्ति तपाईं स्वयम् हो भने १ तथा होइन भने २ नम्बर टाइप गरी पठाउनुहोस् ।
अन्तरास्ट्रिय समाचार सूचना प्रविधि
No Comments on विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलोन मस्कले ४४ अर्बमा ट्विटर किने
आफ्नो जीमेल, फेसबुक वा आईक्लाउड आईडी ह्याक भएको कसरी थाहा पाउने ?
No Comments on आफ्नो जीमेल, फेसबुक वा आईक्लाउड आईडी ह्याक भएको कसरी थाहा पाउने ?
बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधका कारण आफ्ना विवरण अनलाइनमा अनावश्यक रुपमा सार्वजनिक भएको छ वा छैन भने थाहा पाउनु जरुरी छ । आजभोलि फेक म्यासेज, मालवेयर इन्स्टलेसन, फिशिङ ईमेल लगायत विभिन्न माध्यम मार्फत गलत सोच भएका व्यक्तिले प्रयोगकर्ताको विवरण चोरी गरिरहेका हुन्छन् ।
कहिलेकाहिँ त प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने डिभाइस नै ह्याक गरेर पनि संवेदनशील विवरण चोरी भइरहेकाे हुन्छ । ह्याकरले सामान्यतया प्रयोगकर्ताको डेटा चोरी गर्नको लागि जीमेल, फेसबुक र आईक्लाउडको अकाउन्टलाई आक्रमण गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो अकाउन्टबाट ह्याकरले प्रयोगकर्ताको बैंक विवरण जस्ता संवेदनशील डेटा चोरी गर्न सक्छन् । यस्तो प्रकारको ह्याकिङबाट जोगिनको लागि प्रयोगकर्ताहरूले केही विशेष कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
तपाईंको डिभाइस अथवा अकाउन्ट ह्याक भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि केही संकेतमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसको मद्दतले तपाईंले आफ्नो डिभाइस तथा अकाउन्ट ह्याक भएको अथवा नभएको सहजै पत्ता लगाएर त्यस विरुद्ध सुरक्षित कदम उठाउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको डिभाइस तथा अकाउन्ट ह्याक भएका केही संकेत:– ह्याक भएको डिभाइस अन्य समयको सामान्य अवस्थामा भन्दा अस्वभाविक रुपमा स्लो हुनु – डिभाइसमा निरन्तर रुपमा फेक सुरक्षा चेतावनी र संकास्पद ब्राउजरको पप-अप म्यासेज आउनु
– तपाईंले प्रयोग गर्ने ब्राउजर निरन्तर रुपमा अर्को वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट हुनु – ब्राउजरमा ‘एक्स’ रेटेड पपअपहरू आउनु – फेसबुकमा तपाईंको साथीहरूलाई तपाईंको अकाउन्टबाट जथाभावी म्यासेज अथवा लिंकहरू जानु्
– केही अवस्थामा भने डिभाइसमा कुनै अस्वभाविक गतिविधिको विषयमा नोटिफिकेसनहरू पठाउने गर्छ । यस्ता नोटिफिकेसनहरू ध्यान दिनुपर्छ । – ईमेलमा विभिन्न लट्री तथा सहयोगको नाममा फिशिङ ईमेल आउनु
डिभाइस ह्याक भएको थाहा पाएपछि के गर्ने ? – डिभाइसको फ्याक्ट्री रिसेट गर्ने – एन्टि भाइरस प्रोग्राम इन्स्टल गर्ने – साइबर सेक्युरिटी विज्ञ अथवा सुरक्षाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्ने
No Comments on अब फेसवुकमा पनि ‘टिकटक’ जस्तै भिडियो राख्न सकिने, त्यसबाट आम्दानी पनि गर्न पाइने
ुफेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रायः प्रयोगकर्ताले आफ्नो आधा समय भिडिओ हेर्नुहुन्छ। यस्तोमा रिल्स सबैभन्दा प्रभावकारी छ, मेटाले केही समय अघि मात्रै आफ्‍नो ब्लगमा लेखेको थियो, हामी यसैसम्बन्धी फिचर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं। यो फिचरसँगै प्रयोगकर्ताले नयाँ प्रयोगकर्तासँग जोडिनुका साथै आम्दानी पनि गर्न सक्नेछन्।
फेसबुक रिल्समा प्रयोगकर्ताले विभिन्न रिमिक्स भिडिओ बनाउन सक्नेछन् भने अन्य प्रयोगकर्तासँग डुवेट भिडिओ बनाएर अपलोड गर्न सक्नेछन्। यसमा प्रयोगकर्ताले ६० सेकेन्डसम्मको भिडिओ बनाउन सक्नेछन्। त्यस्तै, फेसबुक रिल्समा बनाइएको भिडिओ ड्राफ्टमा पनि सेभ गर्न मिल्नेछ। कम्पनीका अनुसार यसले अर्को महिना नयाँ भिडिओ क्लिपिङ टुल पनि थप्नेछ। जसले प्रयोगकर्तालाई लामो भिडिओहरू इडिट गर्न सहज हुनेछ।
No Comments on फेसबुकले ल्यायो नयाँ फिचर : मेसेन्जरमा यसरी पठाउन सकिन्छ गोप्य मेसेज
काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालमा हुने सुरक्षा प्रणाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै कम्पनीहरुलाई टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। त्यही भएर पनि आफ्नो ती कम्पनीहरु सुरक्षा प्रणाली दुरुस्त राख्न रातदिन घटिरहेका हुन्छन्।
यस्तैमा मेटाले फेसबुक मेसेन्जरको फिचर्समा केही परिवर्तन गरेको छ। फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गर्ने क्रममा स्क्रिन सट लिए तुरुन्तै अर्को व्यक्तिमा पनि नोटिफिकेशन आउने बनाइएको छ। मेसेन्जरको सुरक्षा प्रणालीलाई दुरुस्त राख्न एन्ड टु एन्ड एन्क्रिप्टेडको सपोर्ट पनि दिइएको छ।
पछिल्लो समय फेसबुक मेसेन्जरमार्फत् अपराधिक गतिविधि हुन थालेपछि मेटाले यस्तो फिचर ल्याएको बताइएको छ। त्यस्तै फेसबुकले मेसेज रियाक्सन फिचर पनि जारी गरेको छ।
रोचक सूचना प्रविधि
No Comments on अरूले पत्तै नपाउने गरी यसरी चलाउनुहोस् फेसबुक र मेसेन्जर (तरिका सहित)
फेसबुक एक निजीरूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल हो, जुन फेसबुक निगमको स्वामित्वमा रहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले एक अर्कासँग साथी बन्न र सन्देश पठाउनको लागि यसको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। आफ्नो प्रोफाइल अध्यावधिक गरी साथीहरूलाई उनीहरूबारे जानकारी समेत गराउँदछन्। यसका अतिरिक्त प्रयोगकर्ताको सहर, विद्यालय, कलेज या कार्यस्थलको आधारमा बनाइएका सञ्जालमा सामेल हुन सक्छन्।
आफनो फेसबुक प्रयोगकर्ता पृष्ठको ‘वाल’ वा ‘टाइमलाइन’मा प्रयोगकर्ताले आफनो दैनिकी वा विविध विषय साथीहरू माझ बाँड्न समेत सक्‍छन्। प्रयोगकर्ताहरूले बढीमा ५,००० जना साथी आफ्नो खातामा जोड्न सक्छन्। फेसबुकद्वारा प्रदान गरिएको फेसबुक पृष्ठ नामक विशेष सेवा प्रयोग गरेर चर्चित व्यक्ति, कलाकारहरू आफ्ना प्रशंसकहरूसँग अन्तरक्रिया पनि गर्न सकिन्छ। फेसबुकमा अहिले एकअर्कासँग सन्देश वार्तालाप, भिडियो वार्तालाप, सामूहिक वार्तालाप र गीत सुन्ने जस्ता सुविधाहरू थप गरिएका छन्।
फेसबुक प्रयोग गर्नका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर कम्‍तिमा १३ वर्षको हुनुपर्ने नियम रहेको छ साथै इमेलबाट फेसबुक खातालाई सक्रिय बनाइने भएकाले प्रयोगकर्तासँग निजी इमेल खाता हुनुपर्दछ, इमेल नभए आफ्नो फोन नम्बर राखेर पनि खाता खोल्न सकिन्छ। फेसबुक चलाउन मन नलागेमा आफ्नो खाता निस्कृय पनि बनाउन सकिन्छ।
खाता निस्कृय बनाइसकेपछि तत्कालका लागि फेसबुक खातामा कसैले टिप्पणी, पोस्टलाई लाइक र वालमा लेख्न सक्दैन, तर स्थायीरूपमा भने खाता मेटिदैन र पछि सक्रिय बनाएपछि सबै सूचनाहरू प्राप्त समेत गर्न सकिन्छ। फेसबुकको मुख्य वि’वादको कुरा यसको गोपनीयताको रहेको छ। यो वेबसाइटको नामको उद्गम भने विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई एक अर्कालाई चिन्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार पारिएको पुस्तकको नामबाट आएको हो, जुन नयाँ शत्र सुरु हुने बेला सबै विद्यार्थीहरूलाई दिने गरिन्थ्यो।
सन २०१० नोभेम्‍बर १५का दिन फेसबुकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् सि.ई.ओ.जुकरबर्गले’फेसबुक मेसेज’ सुविधा ल्याउने कुरा सार्वजनिक गरे । उनले एक पत्रकार सम्‍मेलनमा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू @facebook.com राखेर इमेल खोल्‍न सक्‍ने बताएका छन्। कतिले भने ‘फेसबुक मेसेज’ लाई ‘जि-मेल किलर’को संज्ञा समेत दिएका छन्। ‘प्रोजेक्‍ट टाइटान’को कोडनाममा बनाईएको ‘फेसबुक मेसेज’लाई पूर्णरूपमा बनाउन भने १५ महिना लाग्‍ने बताईएको छ।
यदी तपाईले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि मेसेज आउँछ। सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका साथीभाइको मेसेज आउनु पनि स्वाभाविक हो। ती मेसेजमध्ये कुनै मेसेज नचिनेको व्यक्ति अथवा तपाईंलाई मन नपर्ने व्यक्तिले पनि पठाएको हुनसक्छ। तपाईंसँग ती व्यक्तिलाई रिप्लाई नगरी बस्ने विकल्प छ।
तर यसबाहके तपाईं यस्ता सामाजिक सञ्जालमा अफलाइन पनि बस्न सक्नुहुन्‍छ। यसरी अफलाइन बस्नुभयो भने अन्य प्रयोगकर्ताले तपाईं सामाजिक सञ्जाल चलाइ रहनुभएको छ भन्ने थाहा पाउँदैनन्। अनि अनावश्यक रूपमा तपाईंलाई एक्टिभ देखेकै भरमा मेसेज गर्नेहरूले पनि मेसेज गर्न बन्द गर्नेछन्।
फेसबुक मोबाइल एपमा यसरी बस्नुहोस् अफलाइनः
– फेसबुक एपबाट आफ्नो फेसबुक खाता लग-इन गर्नुहोस्।
– मोबाइलको सबैभन्दा माथिल्लो भागको दायाँपट्टी रहेको तीन वटा धर्कोलाई चयन गर्नुहोस्।
– यहाँ तपाईंले तल स्क्रोल गरेपछि ‘सेटिङस् एन्ड प्राइभेसी’ भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यसलाई चयन गर्नुहोस्।
– यसभित्र रहेको ‘सेटिङ्स’ भन्ने विकल्प रोज्नुहोस्।
– यता ‘अकाउन्ट’, ‘प्रिफेन्स’, ‘अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटी’ लगायत विभिन्न खण्ड देख्नुहुन्छ। त्यसको ‘अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटी’ भन्ने खण्डमा जानुहोस्।
– यसको सबैभन्दा तल ‘एक्टिभ स्टाटस’ भन्ने विकल्प हुन्छ। त्यसलाई रोज्नुहोस्।
– अब तपाईंले यहाँ ‘सो ह्वेन यू आर एक्टिभ’ भन्ने देख्नुहुन्छ। यसलाई टर्न-अन अथवा टर्न-अफ गर्न सक्नुहुन्छ।
फेसबुक मेसेन्जरमा यसरी बस्नुहोस् अफलाइनः
– फेसबुक मेसेन्जरबाट आफ्नो खाता लग-इन गर्नुहोस्।
– मेसेन्जर खुलिसकेपछि सबैभन्दा माथिल्लो भागको बायाँपट्टि तपाईले ‘च्याट’ भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यसको छेउमा रहेको प्रोफाइल पिक्चरमा थिच्ने।
– यसमा तपाईंले प्रोफाइल खण्डमा ‘एक्टिभ स्टेटस’ भन्ने देख्नुहुन्छ। यसलाई चयन गर्नुहोस्।
– अब भने तपाईंले यहाँ ‘सो ह्वेन यू आर एक्टिभ’ भन्ने विकल्‍पलाई चयन गरी एक्टिभ स्टाटस टर्न-अन अथवा टर्न-अफ गर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी तपाईंले फेसबुक एप र मेसेन्जर एपबाट अफलाइन बसेर यी सामाजिक सञ्जाल चलाउनु सक्नुहुन्छ। र, तपाईंले फेसबुक/मेसेन्जर चलाइ रहनुभएको छ भने कसैले चाल पनि पाउँदैन किनभने तपाईं अफलाइन हुनुहुन्छ। सेतो पाटि बाट
विश्व इतिहासमा आजः यी चर्चित ४ घटना जो कहिल्यै इतिहाँसले बिर्सिदैन
No Comments on विश्व इतिहासमा आजः यी चर्चित ४ घटना जो कहिल्यै इतिहाँसले बिर्सिदैन
सन् १९९१ मा रोमानियाको संविधान कार्यान्वयनमा आएको थियो । जनमत संग्रहमार्फत नयाँ संबिधान पारित भएको थियो । ४२ वर्षको कम्युनिस्ट शासन ढ’लेपछि रोमानियामा प्रजातन्त्र आएको थियो ।
प्यालेस्टाइनको भूमिमा इजरायलको अ’तिक्रम’णवि’रुद्ध सन् १९८७ मा पहिलो पटक प्यालेस्टाइनमा आन्दोलन भएको थियो । इजरायलको सेनाको ट्रकले एउटा कारमाथि ह’म’ला र चार सर्वसाधरणको हत्यासँगै इजरायली अतिक्रमण सुरु भएको थियो । सन् १९९१ मा भएको म्याड्रिड सम्मेलनपछि सन् १९९३ मा हिंसा समाप्त भएको थियो । प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच सन् २००० मा दोस्रो चरणको हिंसा भएको थियो ।
दोस्रो यु’द्धमा अमेरिकाको प्रवेश
।सन् १९४१ मा अमेरिका औपचारिक रुपमा दोस्रो विश्वयु’द्धमा प्रवेश गरेको थियो । सन् १९४१ को ८ डिसेम्बरमा जापानको जलसेनाले हवाईस्थित पर्ल बन्दरगाहको पनडुब्बी इलाकामा ह’म’ला गरेको थियो । सोही ह’म’लापछि अमेरिका पनि दोस्रो विश्व यु’द्धमा तानिएको थियो ।
No Comments on अब इन्टरनेटविनै ह्वाट्सएप चल्ने
No Comments on भारतले बनायो रनवे नचाहिने चमत्कारीक उड्ने कार , घरको छतबाटै उड्छ, बायो फ्युल लाग्ने
No Comments on इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय